Mandà Tsy Handray Anjara Amin’ny Fanampiana Noho Ny Horohorontany Tao Sichuan i Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2013 9:51 GMT
Tamin'ny 22 Aprily 2013, vantany vao nanambara ny drafitry ny governemanta hanolotra 100 tapitrisa dolara Hong Kong i Leung Chun-ying, olom-pirenena maro tao HK no nanohitra io hevitra io, natahotra fa ny fanampiana dia hiafara amin'ny famokisana an'ireo mpiasam-panjakana mpanodikondim-bola fa tsy lasa any amin'ireo olona tokony mila azy.
Tamin'ny fitsapan-kevitra natao tety anaty aterineto nampanaovin'ny SCMP.com ny 23 aprily 2013, izay nahazoana vato 5.000, ny 92 isanjaton'ny mpamaly dia nanao “tsia” tamin'ny fanontaniana “Tokony hanaiky ny fanampiana 100 tapitrisa dolara HK ho an'ireo niharan'ny horohorontany tao Sichuan ve ny solombavambahoaka?”
Ny fanoherana mahery vaika an'ilay drafitra dia noheverina ho vokatry ny fanararaotan'ireo manampahefana ao amin'ny Tanibe amin'ny fanampiana natao ho an'ny horohorontany tany Wenchuan tamin'ny taona 2008 sy ireo tantara ratsim-panodinkodinana mitohy. Sekoly iray izay novatsian'i Hong Kong vola ny fanamboarana azy taorian'ny horohorontany no noravana tamin'ny taona lasa mba hanomezana toerana ny fananganan-trano ho an'ny fampandrosoana ara-barotra.
Ny fanoheran'i Hong Kong tsy hanome fanampiana dia nahita akony tamin'ireo mpampiasa ny Weibo tany amin'ny tanibe. Tao amin'ny bilaogy kiritika fanta-bahoaka, Sina Weibo, naneho ny fahazoany ny ahiahin'i Hong Kong ireo mpampiasa aterineto sady niantso fisaintsainana ho an'ireo mpiasam-panjakana any Hong Kong. Ny sasany nametra-panontaniana mikasika ny tena hevitra manontolon'ilay fanampiana, satria fantany fa manam-bola sahaza tsara hiatrehana ny fandaniana amin'ilay loza voajanahary ny governemanta.
Famakafakan'ny olona iray mpisera anaty aterineto no naverina nalefa im-28843 tao amin'ny Sina Weibo:
Namono olona 193 ny horohorontany tany Sichuan. Sarin'ny mpampiasa Flickr @Shigi Shen (CC BY-SA 2.0)
Isaky ny mikapoka ny tanibe ny loza voajanahary goavana, manome fanampiana ampahavitrihana ny vahoakan'i Hong Kong. Dimy taona lasa izay, taorian'ny horohorontany goavana tao Wenchuan, ny governemanta sy ny vahoaka dia nanolotra vola mitontaly telo amby roapolo miliara yuans, ny ambony indrindra teo amin'ny tantara. Saingy kosa, taorian'ny horohorontany tany Ya'an tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nisy hita mihintsy ilay fomban'ny vahoaka Hong Kong manao filaharana hanolotra fanampiana, na dia ny vinavinan'ny governemanta mikasika ny 100 tapitrisa dolara HK ho vonjy taitra amin'ny loza voajanahary aza dia niteraka adihevitra. Tsy hoe ny vahoakan'i Hong Kong akory no nanjary nangatsiaka, na tena mahantra tsy afaka hanampy, fa vokatry ny kolikoly ankapobeny ataon'ny mpiasam-panjakana any amin'ny tanibe izay mampiasa tsy araka ny tokony ho izy ireo fanampiana tsy asiana fanaraha-maso na mangarahara. Tsy misy afaka manome antoka fa tsy ho voahodina indray ny vola, ary ho hitsakitsahana indray ny fitiavantsika.
Nanely io fihetsehampo io i “Tuuu Wei”, mpampiasa tranonkala avy any Shanghai :
Nahoana ny governemanta no nanodina ireo fanampiana ho an'ny horohorontany tany Wenchuan ireo? Tsy mahagaga raha manana ahiahy ny mponina any Hong Kong. Volan'ny mpandoa hetra avy amin'ny rà latsaka sy ny hatsembohan'izy ireo. Tiako ny demokrasia sy ny fahitsiana ao Hong Kong.
“Xin chaodao” avy amin'ny tanan'i Shenzhen mifanakaiky amin'i Hong Kong no nitaraina hoe:
Tsy mino mihintsy izahay fa ho tonga any ampelatanan'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany ireo fanampiana, mba tsy hilazana ireo vahoaka any Hong Kong.
Lian Peng, mpanoratra, naneho hevitra hoe:
Tsy olana ny vola, tsy lany ny vola aty aminay, saingy ny mahatahotra dia ny fahaverezan'ny fitokisan'ny olona.
Ilay mpiantsehatra malaza, Chen Kun, nanamafy ireo eritreritr'i Lian Peng:
Tsy ny fanampiana na tsia no olana, ny fitokisana! Fitokisana [no izy]! Ny fahaverezan'ny fitokisana no olana fototra izay tsy maintsy tsaboina haingana.
“Baoxiang Siyi” nanoratra hoe:
Krizin'ny fitokisana [io], mila mandinika isika!
“Liuxue bu Liu lei 08” nanipika ny antony fototry ny kolikoly tsy misy fitsaharana:
Without any strict regulatory system, or punishment for breaking the law, the dark side Raha tsy misy rafitra fanaraha-maso ara-dalàna matotra, na sazy noho ny fandikàna lalàna, dia hiseho ny lafy ratsin'ny maha-olobelona. Aza saziana ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly, sazio ny rafitra izay tsy manakana azy ireo.